Wararka Maanta: Talaado, July 3 , 2012-Hay'ada SYAO oo tartanka todobaadka xornimada Soomaaliya u qabatay Maxaabiista Xabsiga Dhexe ku jirta (SAWIRRO)
Talaado, July 03, 2012 (HOL) - Waxaa lagu soo gaba gabeeyay Xabsiga Dhexe ee Xamar Tartan loogu magac daray Todobaadka iyo Xornimada Soomaaliya, kaasoo ay ka qeyb galeen ilaa lix kooxood oo wada ciyaaray ciyaaro is arag ah.
Tartankan ayaa ahmiyadiisa koowaad ahaa mid SYAO ay dhiira gelin ugu sameyneysay maxaabiista ku jirta Xabsiga dhexe, isla markaana la dareensiineysa qiimaha ay leedahay Xornimada, iyadoo Koobkii lagu maamuusayay Tartankaas ay ka wada qeyb galeen ilaa lix kooxood oo laga soo kala xulay Maxaabiista ku jirtay Xabsiga.
Munaasabadii xeritaanka oo aheyd mid si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay oo ka dhacday gudaha Xabsiga ayaa waxaa khudbado u badnaa dhiirigalin iyo hambalyada Maalinta Xornimada Soomaaliya ka jeediyay Mas'uuliyiintii ka qeyb gashay, oo bogaadiyay in tartan is dhex gal bulsho loo sameeyo Maxaabiista ku jirta Xabsiga si aanay u niyad jebin.
Gudoomiyaha Ururka u dooda xuquuqda dhalinyarada ee SYAO Maxamed Ibraahim cali (Cajiib) oo ka hadlay Munaasabada ayaa sheegay in Tartankan ay u qabteen ujeedooyin badan, isagoo xusay in ugu horeyn muhiimada ay aheyd in la xusuusiyo dhalinyarada ku jirta Xabsiga qiimaha ay leedahay Xornimada iyo Nabadda.
"Ugu horeyn waxaa farxad ii ah in maanta dhalinyaradii xabsiga ku jirto, inaan tusno waxa ay tahay Nabada iyo is dhex galka bulshada, waxaa kaloo dareensiinay qiimaha xorriyada, ma ahan kaliya in qofka xabsiga ku jiro inuu isu heysto in bulshada intiisa kale aan lala noolaan karin, hadii uu qol ku jiro, maantana waa ujeedaan is dhex galkan wuxuu kaalin ka qaadanaysaa niyadooda, dhiira gelinna waa u tahay, waxaan balan qaadeynaa in dhalinyarada xabsiga ku jirta inaan wacyi gelin iyo aqoon kororsi u sameyno, si aanay mustaqbalkooda uga quusan"ayuu yiri Mr Cajiib oo khudbad dhiira gelin ah u jeediyay dhalinyarada ku jirta Xabsiga.
Gudoomiyaha Isbaheysiga Nabada C/llaahi Sheekh Xasan ayaa uga mahad celiyay doorka SYAO ka qaadatay horumarinta dhalinyarada iyo barnaamijyada wacyi gelinta ah, isagoo tartankan loo qabtay dhalinyarada ku sifeeyay mid sare u qaadaya niyada dhalinta xabsiga oo noloshooda ay dib u soo laaban karto, isagoo xusay in qofka dambiga galay ee xabsiga ku jira uu yahay Bani'aadam, laakiin loo baahan yahay in aanu dambi kale gelin, hadii uu soo dhameysto mudada uu xabsiga ku jiro.
Ugu dambeyn Ururka SYAO ayaa waxaa uu abaal marino kala duwan gudoonsiiyay Kooxdii ku guuleysatay tartankan iyo dhamaan kooxihii ka qeyb galay tartan ciyaareedkaas.